Col. Rufle: “Ciidanka Kenya Ee Adoonta Ah Waxay Naga Dileen Labo Askari oo Ciidankagaya Ah oo Ka Raacay Faxfaxdhuun” (Dhageyso) – Shabakadda Amiirnuur
Col. Rufle: “Ciidanka Kenya Ee Adoonta Ah Waxay Naga Dileen Labo Askari oo Ciidankagaya Ah oo Ka Raacay Faxfaxdhuun” (Dhageyso)
March 3, 2019 5:26 pm by admin Views: 159
Dowladda Federalka ah ayaa xaqiijisay in ciidankii Kenya ee ka baxay Faxfaxdhuun ay dileen labo ka tirsan askarteedii ka raacay degaankaas islamarkaana mudadii sideeda sano ahayd ee ay halkaas heysteen la joogay.
Col. Rufle oo kamid ah saraakiisha DF oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa isagoo aad u careysan cod dheer ku sheegay in askarta Kenya ay si xun u dileen labo ka tirsan ciidamada dowladda, wuxuuna ku tilmaamay gumeystayaal.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in Kentaatigu ay tacaddiyo badan ka geysteen Gedo, haddana ay doonayaan iney ka baxaan degaanka Buusaar oo ah goobta kaliya ee ay baaqiga ku yihiin marka Gedo la eego.
Wuxuu sheegay in ay gumeysi ku hayaan gobolka Jubada Hoose isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay iney u istaagaan sidii ay isaga xoreyn lahaayeen. Sarkaalkan ayaanan marnaba soo hadal qaadin Itoobiyaanka ku sugan Baardheere, Garbahaarey iyo meelaha lamidka ah, waxaana dadka qaar ay hadalkiisa ku macneeyeen mid laab lakac ah.
Ciidamada shisheeye ayaa had iyo goor si xun ula dhaqma askarta DF, maadaama markii horaba cidda laga amar qaadanayo ay shisheeyaha ahaayeen, mana ahan markii ugu horreysay oo ay askarta Kenya si bareer ah u dilaan askarta DF.
Halkan Ka Degso Shirka Jaraa’id ee Col Aadan Rugfle